महिला स्वास्थ्य र जीवनशैली
डा. सरिता श्रेष्ठ मानिसको स्वास्थ्य उसको दिनचर्यामा निर्धारित हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार हरेक व्यक्ति तथा उसका क्रियाकलाप, शारीरिक, मानसिक एवम् सामाजिक आवश्यकता पनि भिन्न हुन्छन् । मनुष्यको विकासको इतिहास नियाल्ने हो भने अन्य जनावरझैं मानिस पनि एक शारीरिक परिश्रम अभिमुखी प्राणी हो । साथै, सामाजिक...
फेरिँदो जीवनशैलीसँगै जङ्क फूडको बढ्दो प्रयोगले हाल मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्या पर्ने गरेको छ । अस्वस्थ खानपानका कारण हुने धेरै किसिमका समस्यामध्ये एक समस्या पत्थरी हो । पत्थरीलाई बुढेसकालको रोग भन्ने आमबुझाइ छ । पछिल्लो समय अस्पताल धाउने बिरामीहरूमा पत्थरीका बिरामीको सङ्ख्या उल्लेख्य रू...
स्त्रीरोगको उपचारमा विभिन्न प्रविधि भित्रिरहेका छन् । पाठेघरभित्रको अवस्था बुझ्न तथा समस्याको पहिचान गरी उपचार गर्न हिस्टरोस्कोपी प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । कल्कोस्कोपी विधिबाट पाठेघरको सङ्क्रमणको अवस्था पत्ता लगाइन्छ । पुरानो विधिबाट अप्रेशनमा गर्दा १० सेण्टिमिटर चिर्नुपर्छ भने ल्याप्रोस्कोपी...
छालामा केही समस्या देखियो भने सामान्य रूपमा लिने प्रचलन नेपाली समाजमा छ । झन् छालाकै कारण टाउकोमा कपाल पलाएन भने बुद्धिमान र भाग्यमानी भएको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा विभिन्न सङ्क्रमण, वंशानुगत, हर्मोनलगायत कारणले छालामा समस्या देखिन्छ । छालाको उपचारका लागि बेलैमा चिकित्सककोमा नगए समय र पैसाको त...
होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीप्रति नेपालमा पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ । सन् १७९६ मा जर्मनीका डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सामुयल हनिम्यानले प्रतिपादन गरेको यो उपचारपद्धतिमा ‘साइड इफेक्ट’ नहुने भएकाले प्रभावकारिता बढ्दै गएको हो । भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको यो उपचारपद्धतिबारे खासगरी भारतीय मूलका नेपाली परिच...
महिला स्वास्थ्य विषय महिला मात्र नभई परिवार, समुदाय, समाज एवम् देशको गतिलो विकासका लागि अति आवश्यक छ । यद्यपि, यो यथार्थलाई नेपाली समाजले आजसम्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन । अझै पनि गाउँघरमा यो विषय अत्यन्त न्यून प्राथमिकतामा परेको डा. सरिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । महिला स्वास्थ्य विषयका ज्ञाता उनी माउण्ट...
निरन्तरको पेट दुखाइ पित्तथैलीको पत्थरी हुन सक्छ
ग्याष्ट्रिक भयो र पेट दुख्यो भनेर अस्पताल आउनेमध्ये २५ प्रतिशतलाई पित्तथैलीमा पत्थरी भएको पाइएको डा. सुजितकान्त मैनाली बताउँछन् । चीनको सिनस्याङ विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस र याञ्चे विश्वविद्यालयबाट जनरल सर्जरीमा एमएस गरेका डा. मैनाली मध्यपुर अस्पतालमा कार्यरत छन् । ग्याष्ट्रिककै जस्तो पेट दुख्ने भएका...
गर्मीमा छालाको हेरचाह
मौसम परिवर्तनसँगै छालामा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या आउँछन् । त्यसैले, मौसमअनुसार छालाको हेरचाहमा उत्तिकै होशियारी अपनाउनुपर्छ । गर्मीमा धूलो, धूवाँ, प्रदूषण एवम् चर्को घामको समस्या बढी हुन्छ । छालाको सौन्दर्य कायम राख्न यस्ता समस्याबाट जोगिनुपर्छ । अनुहारको क्लिञ्जिङ गर्मी मौसममा छालाको नियमित...
पाचन प्रक्रिया सन्तुलित राख्ने उपाय
खाना खानेबित्तिकै हुने थकान, सुस्ती वा पेट फुल्नेजस्ता समस्या जो कोहीलाई हुन सक्छ । विभिन्न कारणले पाचन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर, यसका लागि अस्पताल जानैपर्छ वा एलोपेथिक औषधि नै खानुपर्छ भन्ने छैन । साधारण आयुर्वेदिक उपचार विधि अपनाएरै यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । पेटसम्बन्धी स...
पेटको समस्यामा नजँचाई औषधि नखानुहोस्
किङ्ग एडवार्ड मेडिकल कलेज, पाकिस्तानबाट एमडी गरेका डा. सन्दीपराज कुँवर सिनियर ग्याष्ट्रोलोजिष्ट हुन् । उनी दैनिक २५–३० जना पेटका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन् । बिरामीले पेटको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिने र आफ्नै लापरबाही तथा जथाभावी औषधि सेवनले यस्तो समस्या हुने गरेको उनको ठम्याइ छ । पछिल्ला अध...